Olee Ndị Bụ Ndị Mmụọ Ozi? | Ajụjụ Ndị Baịbụl Zara
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Fijian Finnish French Georgian German Greek Greenlandic Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Myanmar Norwegian Nzema Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Turkish Ukrainian Venda Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Ndị Mmụọ ozi bụ ndị e kere eke ka ụmụ mmadụ ike. (2 Pita 2:​11) Ha bi n’eluigwe, bụ́kwanụ ebe karịrị ụwa anyị a. (1 Ndị Eze 8:​27; Jọn 6:​38) A na-akpọkwa ha ndị mmụọ.​—1 Ndị Eze 22:21; Ọma 18:10.
Olee ebe ndị mmụọ ozi si?
Chineke si n’aka Jizọs kee ndị mmụọ ozi. Baịbụl kpọrọ Jizọs “onye e bu ụzọ mụọ n’ime ihe niile e kere eke.” Baịbụl gwara anyị otù Chineke si jiri Ọkpara ya kee ihe. Ọ sịrị: “N’ihi na e si n’aka ya kee ihe ndị ọzọ niile n’eluigwe na n’elu ụwa, ihe ndị a pụrụ ịhụ anya na ihe ndị a na-apụghị ịhụ anya.” Ndị mmụọ ozi sokwa n’ihe ndị a Jizọs kere. ( Ndị Kọlọsị 1:​13-​17) Ndị Mmụọ ozi anaghị alụ nwanyị, ha anaghịkwa amụ ụmụ. (Mak 12:25) Kama, e kere “ụmụ ezi Chineke” a otu otu, o nweghị nke mụrụ ibe ya.​—Job 1:6.
Ọ dịla anya e kere ndị mmụọ ozi tupu e kee ụwa. Mgbe Chineke kere ụwa, ndị mmụọ ozi “niile malitekwara iti mkpu otuto.”​—Job 38:​4-7.
Ndị mmụọ ozi hà dị ole?
Baịbụl ekwughị ole ha dị, kama o gosiri na ha dị ọtụtụ. Dị ka ihe atụ, n’ọhụụ e gosiri Jọn onyeozi, e mere ka ọ hụperetụ ọtụtụ narị ijeri ndị mmụọ ozi.​—Mkpughe 5:​11.
Ndị mmụọ ozi hà nwere aha na àgwà e ji mara ha?
Ee, ha nwere. Na Baịbul, a kpọrọ aha ndị mmụọ ozi abụọ: Maịkel na Gebriel. (Daniel 12:1; Luk 1:​26) * Ndị mmụọ ozi ndị ọzọ kwuru ihe gosiri na ha nwere aha, mana ha ekwughi aha ha.​—Jenesis 32:29; Ndị ikpe 13:17, 18.
Ndị mmụọ ozi nwekwara ihe e ji mara ha n’otu n’otu. Ha na ibe ha na-akparịtakwa ụka. (1 Ndị Kọrịnt 13:1) Ha nwere ike iche echiche, nweekwa ike ịrọ abụ iji too chineke. (Luke 2:​13, 14) Ha nwekwaara onwe ha ịhọrọ ime ihe ọma ma ọ bụ ihe ọjọọ. Ihe gosiri na nke a bụ eziokwu bụ mgbe ụfọdụ n’ime ha họọrọ iso Setan nupụrụ Chineke isi.​—Matiu. 25:41; 2 Pita 2:4.
Ndị mmụọ ozi hà nwere ọkwa dị iche iche?
Ee. Maikel, bụ́ onye isi ndị mmụọ ozi, kacha ndị mmụọ ozi ọzọ niile. (Jud 9; Mkpughe 12:7) Ndị Seraf bụ ndị mmụọ ozi ọzọ ọkwa ha dị elu. Ha na-anọ nso ocheeze Jehova. (Aizaya 6:​2, 6) Ndị mmụọ ozi ndị ọzọ e nyere ọrụ pụrụ iche bụ Ndị Cherub. Dị ka ihe atụ, ọ bụ ha chere ụzọ e si aba n’Ogige Iden nche mgbe a chụpụrụ Adam na Iv na ya.​—Jenesis 3:​23, 24.
Ndị mmụọ ozi hà na-enyere ndị mmadụ aka?
Ee. Chineke na-eji ndị mmụọ ozi ya enyere ndị mmadụ aka taa.
Chineke na-eji ndị mmụọ ozi eduzi ndị ohu ya ikwusa ozi ọma Alaeze ya. (Mkpughe 14:​6, 7) Ọrụ a ndị mmụọ ozi na-arụ na-abara ma ndị na-ekwusa ya ma ndị na-anabata ozi ọma ahụ uru.​—Ọrụ Ndịozi 8:​26, 27.
Ndị mmụọ ozi na-enye aka echebe ọgbakọ Ndị Kraịst ka ndị ọjọọ ghara imerụ ya.​—Matiu 13:49.
Ndị mmụọ ozi na-eduzi ndị na-eme uche Chineke, na-echebekwa ha.​—Abụ Ọma 34:7; 91:10, 11; Ndị Hibru 1:​7, 14.
N’oge na-adịghị anya, ndị mmụọ ozi ga-eso Jizọs lụọ agha iji wepụ ihe ọjọọ n’ụwa a, ma mee ka ụmụ mmadụ nwere onwe ha.​—2 Ndị Tesalonaịka 1:​6-8.
Onye ọ bụla ò nwere mmụọ ozi na-eche ya nche?
Ọ bụ eziokwu na ndị mmụọ ozi na-enyere ndị na-efe Chineke aka ịhụ na ha nọsiri ike na-eme uche Jehova, ọ pụtaghi na Onye Kraịst ọ bụla nwere mmụọ ozi Chineke dunyere ka ọ na-eche ya nche. * (Matiu 18:10) Ọ bụghị ọnwụnwa ọ bụla ma ọ bụ nsogbu ọ bụla ka ndị mmụọ ozi na-echebe ndị ohu Chineke na ya. Baịbụl gosiri na Chineke “ga-eme ụzọ mgbapụ” ma ọnwụnwa bịa. Otú o si eme ya bụ inye onye ahụ amamihe na ike ọ ga-eji die ya.​—1 Ndị Kọrịnt 10:12, 13; Jems 1:​2-5.
Ihe na-abụghị eziokwu ndị mmadụ na-ekwu gbasara ndị mmụọ ozi
Ụgha: Ndị mmụọ ozi niile dị mma.
Eziokwu: Baịbụl kwuru gbasara “ìgwè ndị mmụọ ọjọọ” nakwa “ndị mmụọ ozi mehiere emehie.” (Ndị Efesọs 6:​12; 2 Pita 2:4) Ndị mmụọ ozi ọjọọ a bụ ndị mmụọ ọjọọ, ndị sooro Setan nupụrụ Chineke isi.
Ụgha: Ndị mmụọ ozi anaghị anwụ anwụ.
Eziokwu: A ga-ebibi ndị mmụọ ozi nụpụrụ isi, ha na Setan.​—Jud 6.
Ụgha: Ndị mmadụ na-aghọ ndị mmụọ ozi ma ha nwụọ.
Eziokwu: Ndị mmụọ ozi bụ ndị Chineke kere ka ha bụrụ ndị mmụọ ozi, ha abụghị ụmụ mmadụ e si n’ọnwụ kpọlite. (Ndị Kolosị 1:​16) Chineke na-eme ka ndị mmadụ a kpọlitere n’ọnwụ ha agaa eluigwe bụrụ ndị na-anaghị anwụ anwụ. (1 Ndị Kọrint 15:53, 54) Ha ga-enweta ọnọdu karịrị nke ndị mmụọ ozi.​—1 Ndị Korịnt 6:3.
Ụgha: E kere ndị mmụọ ozi ka ha na-ejere ndị mmadụ ozi.
Eziokwu: Ọ bụ ihe Chineke kwuru ka ndị mmụọ ozi na-eme, ọ bụghị ihe anyị kwuru. (Abụ Ọma 103:20, 21) Jizos n’onwe ya kwudịrị na ya ga-arịọ Chineke maka enyemaka, ọ bughị ndị mmụọ ozi.​—Mat. 26:53.
Ụgha: Anyị nwere ike ịrịọ ndị mmụọ ozi n’ekpere ka ha nyere anyị aka.
Eziokwu: Ikpere Chineke ekpere so n’otú anyị si efe ofufe. Ọ bụkwanụ naanị ya ka anyị kwesịrị ife. (Mkpughe 19:10) Ọ bụ naanị Chineke ka anyị kwesịrị ikpere ekpere site n’aha Jizọs.​—Jọn 14:6.
^ para. 10 Aha ahụ bụ́ “Lusifa” dị na Baịbụl ụfọdụ n’Aịzaya 14:12. Ọtụtụ ndị chere na ihe a bụ aha mmụọ ozi ahụ mechara ghọọ Setan bụ́ Ekwensu. Ma, okwu Hibru e si sụgharịa Lusifa pụtara “nwa chi ọbụbọ.” Ihe ndị ọzọ e kwuru ebe ahụ gosiri na ọ bụghị Setan ka a na-ekwu okwu ya, kama ọ bụ ndị eze Babịlọn, bụ́ ndị Chineke ga-eweda n’ala n’ihi mpako ha. (Aịzaya 14:​4, 13-​20) A kpọrọ ndị ọchịchị Babịlọn “nwa chi ọbụbọ” iji kwaa ha emo mgbe a kwatuchara ọchịchị ha
^ para. 21 Ndị ụfọdụ na-ekwu na ihe ahụ Baịbul kọrọ banyere otù e si tọhapụ Pita n’ụlọ mkpọrọ na-egosi na Pita nwere mmụọ ozi na-eche ya nche. (Ọrụ Ndịozi 12:​6-​16) Ma, mgbe ndị na-eso ụzọ Jizọs kwuru gbasara “mmụọ ozi [Pita],” o nwere ike ịbụ na ha chere na mmụọ ozi nke na-anọchi anya Pita bịara kama Pita ịbịa n’onwe ya.
Lee ihe Baịbụl kwuru gbasara onye anyị kwesịrị ikpegara ekpere.